အဆီကျပိန်ဆေး Xenical | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အဆီကျပိန်ဆေး Xenical
Posted by မမလေး on Sep 15, 2010 in Health & Fitness | 10 comments
အဆီကျဆေး နာမည်က Xenical ပါ ။ Xenical က တစ်ကဒ်ကို 15000 တစ်ချို့ဆိုင်တွေမှာ 14000 ရှိပါတယ်။
Xenical က တစ်ခြားဆေးတွေလို တုန်တာတွေ ၊ အားမရှိသလိုဖြစ်သွားတာတွေ ၊ အစာမစားခြင်တာတွေ ၊ အစာစားရင်အန်ချင်တာတွေ ၊ မူးမော်တာတွေ မဖြစ်ပါဘူး ။ ခုလက်ရှိ Gong Zhu သောက်နေတာပါ ။ Xenical က စားလိုက်တဲ့ အစာထဲမှာ အဆီတွေပါရင် အဆီတက်ပြီး မ၀အောင် အဆီတွေကိုပြန်စွန့်လိုက်တာပါ ။ ၀မ်းသွားရင်ကို အဆီတွေသွားတယ်ပေါ့နော်။ ဗိုက်လည်းမအောင့်ဘူး မူးလည်းမမူးဘူး ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် သန့်စင်ခန်းတော့ မကြာမကြာသွားရပါတယ်။ ကိုယ်စားရင်စားသလောက် အဆီတွေ စွန့်ပစ်ရတာပေါ့နော် . . .
Xenical ဆေးက အောက်လိုင်း နဲ့ Company ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အောက်လိုင်း ကတော့ တစ်ဗူး လေး ကဒ်ပါတယ် ၅၀၀၀၀ ပါ ။ Company ကတော့ တစ်ဗူးလေးကဒ်နဲ့ ၅၃၀၀၀ ပါ။ ဒါကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာပေါ့နော်။ တစ်လုံးချင်းလည်းဝယ်သောက်လို့ရပါတယ် တစ်လုံး ၇၅၀ ပါ။ Company ကတော့ မှတ်ပုံတင်ပြီးသားပေါ့ အောက်လိုင်းကတော့ မှတ်ပုံမတင်ရသေးတာလို့ ဆေးဆိုင်ကပြောပါတယ်။
ဒီဆေးက ဆရာဝန်ညွှန်ကြားပေးတဲ့ဆေးဖြစ်သလို ဆရာဝန်မလေး ကိုယ်တိုင်သောက်တယ်လို့လည်း ဆေးဆိုင်ကပြောပြပါသေးတယ် ။ ။ ။
အဲ့ဆေးကိုမသိခင်တုန်းက Gong Zhu တစ်ခြားဆေးနှစ်မျိုးကိုသောက်ဖုးပါတယ် ။ မူးလည်းမူးတယ် ။ အန်လည်းအန်ချင်တယ် ။ အိပ်ယာထဲမှာပဲလှဲနေရတယ် အားမရှိလို့လေ ။ ဘာမှလည်းမစားချင်ဘူး . စကားလည်းမပြောချင်ဘူး . ရယ်စရာတွေ့နေရင်တောင်မှ မရယ်ချင်ဘူး . ဒေါသလည်းထွက်လွယ်တယ် . စိတ်အားငယ်သလိုလို . စိတ်ညစ်သလိုလို . ငိုချင်သလိုလိုနဲ့ . အစာစားလိုက်ရင်လည်းအန်တယ် အဲ့တုန်းက ဆေးကို တစ်ရက်ခြားတစ်ခါနဲ့ ၅ ရက် ၅ လုံးသောက်လိုက်ပါတယ် ။ ၁၀ ပေါင်ကြော်တောင်ကျသွားတာ မျက်နှာကအစချောင်ကျသွားတာသိလား ။ ဗိုက်အောင့်တာနဲ့ ဆရာဝန်ကိုပြလိုက်တော့ အစာအိမ်ရောင်နေတယ်တဲ့ . ဘာလုပ်လို့လဲလို့ ဆရာဝန်မလေးကမေးတယ် ။ ပိန်ဆေးသောက်လိုက်လို့ လို့ ပြောပြလိုက်တော့ ဆရာဝန်မလေးကလည်း သူလည်း ပိန်ဆေးသောက်ပြီးတော့ မူးလဲဖူးတယ်တဲ့ ခုဆိုရင် သူက ည ၆ နာရီကျော်ရင် ဘာမှမစားတော့ပဲ ဗိုက်ဆာလာရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်လောက်ပဲစားတာ ၂ ပတ်ပဲရှိသေးတယ် သိသာလာတယ်လို့ပြောပါတယ် ။
Exercise လုပ်ဖို့ ပျင်းသူတွေ ၊ အချိန်မရှိသူတွေ ၊ ပိန်ချင်ပြီး ညစာမစားပဲ မနေနိုင်သူတွေနဲ့ ၊ အစာလျော့မစားနိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆို Xenical ဆေးက ကောင်းပါတယ် ။ တစ်ခြားကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့ဆေးတွေကို နားမယောင်လိုက်ပါနဲ့ . သောက်ဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဆီမှာသေသေချာချာ စုံစမ်းပြီးမှ သောက်သင့်ပါတယ် . မဟုတ်ရင် ပိုက်ဆံလည်းကုန် ဆေးလည်း လွှင့်ပစ် ၊ လူလည်း ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါ . ဒီဆေးလေးကတော့ လက်တွေ့မို့လို့ပြောပြပေးလိုက်တာပါ . ဈေးနှုန်းပြောပြတယ်ဆိုတာကလည်း တစ်ချို့တွေက သောက်ချင်ပြီး ဈေးနှုန်းမသိသေးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေအောင်ပါ ။ ကြော်ငြာနေတယ်ထင်မှာစိုးလို့
အဲ့ Company နဲ့ Gong Zhu နဲ့လုံးဝမသိဘူးနော် ဟီးဟီး
( မူးတယ်ဆိုတဲ့ ဆေးကို ဓါတ်ပုံတင်ရင် Burn ခံရမှာလားဟင် ? )
Xenical DKSH company ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးပေးနေပြီး…သူရဲ့ Principal ကတော့ နံမည်ကြီး ROCHE company ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လိုင်းက၀င်တဲ့ ဆေးတွေကို ၀ယ်သုံးမယ့် အစားCompany ကဆေးကိုပဲဝယ်ယူသုံးစွဲသင့် တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
သူက တစ်နေ့စာ စားသမျှထဲက အဆီတွေကို ကိုယ်ထဲမှာ အဆီမတက်အောင် စွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တာလေ ။ ဆေးဆိုင်က ဆရာဝန်ပြောတာတော့ ကိုယ် ထဲမှာ အဆီတွေမရှိတော့ရင် နဂိုရှိတဲ့ အဆီတွေကိုယူပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အတွက် အဆီကျတယ်လို့ပြောပါတယ် . . .
ှအဲဒီဆေးရဲ့ အသက်…အကန့်အသတ်က ဘယ်နာနှစ်မှစသောက်ရတာလဲ..၁၇နှစ်လား…၁၈နှစ်လား..
emily က ၁၇၊၁၈ နှစ်ရှိတဲ့ ၀၀ လှလှလေး လား ….. စတာနော်.. comment စစချင်း ဒီအကြောင်း အရာ ဖြစ်နေလို့ ပါ။
‌ဆေးနမူနာ ‌တော့မပြ ‌ပေးဘူး နယ်ဆိုင်မှာရပါ့မလား
အောက်လိုင်းနဲ့ Company ဘယ်လိုခွဲရလဲဟင်…တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်ရမှာလား…ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ..
gucci shawty says:
Xenical မသောက်ဖူးဘူး ပေါင်ဘယ်လောက်ကျတာလဲ ပြောပြပေးပါ
ခု Xenical ထက်ကောင်းတဲ့ ဆေးရှိတယ် … သိချင်လား